Mpikatroka ho an’ny fiteny yorùbá mitolona ho an’ny hamaroam-piteny ety anaty habaka nomerika · Global Voices teny Malagasy
Adéṣinà Ọmọ Yoòbá, mpikatroka ho fampiasana ny yorùbá anaty aterineto
MpanoratraAdéṣínà Ọmọ Yoòbá
Nandika (fr) i Dorothée Manteau
Voadika ny 16 Jona 2020 8:09 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 한국어, Français, Español, Nederlands, English, Ελληνικά, English
Mpisorona ao amin'ny tempoly Ọ̀ṣun, atsimo-andrefan'i Nizerià. 15 novambra 2018. Sary an'i Carsten ten Brink, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
Fanamarihan'ny toniandahatsoratra : ity andrana manokana ity dia nosoratana taorian'ny fanentanana iray tao amin'ny Twitter nokarakarain'ny vakim-paritry ny Global Voices manao fandrakofana ny faritra Afrika atsimon'i Sahara sy ny Rising Voices. Isankerinandro dia misy mpikatroka iray avy amina fiteny samihafa hizara ny fomba fijeriny ny fihaonan'ny zo nomerika sy ireo fiteny afrikàna, ao anatin'ny tetikasa iray antsoina hoe ” Tahalan'ny maripamantarana: Fanarahamaso mandalo amin'ireo sehatra mankany amin'ny raho-mitatao amin'ny fahalalahana maneho hevitra ao Afrika».
[Fanamarihan'ny mpandika, raha tsy misy fanambaràna mifanohitra, dia rohy mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy no ato anaty lahatsoratra.]
Na iza na iza vondron'olona eto ambonin'ny tany dia manana kolontsaina tokamiavaka itarafany ny tenany, sy manana ny maripamantarana azy manokana. Indrisy anefa, dia voaloton'ny fitsofohan'ny mpanjanatany tao Afrika. Iray tamin'ireny ny fandisoana ny fitantaràna hoe ny tantaran'i Afrika dia tsy nanomboka raha tsy taorian'ny fitsofohan'ireo eorôpeàna mpitrandraka.
Ny resabe tahaka izany dia tsy manana ny toerany noho ny asan'ireo Afrikàna mpahay tantara mpitondra fanavaozana, toa an'i Kenneth Dike, izay mampiasa ireo lovantsofina momba ny kolontsaintsika, fa tsy ireo tantara voasoratra. Ankoatra izay, ny fanefena kaody (code) ho an'ny literatiora yorùbá any anatin'ireo boky voatonta sy nomerika dia manamafy ny maha-ara-tantaran'ilay fiteny.
Ny yorùbá, izay fiteny mampiasa betsaka ny tsindrimpeo, dia ampiasain'ireo olona manodidina ny 30 tapitrisa any atsimo-andrefan'i Nizerià, sy any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, Bénin, Togo ary i Sierra Leone. Misy 100.000 eo ho eo no mampiasa io fiteny io ao Royaume-Uni ary 190.000 ao Etazonia.
Ny yorùbá dia tsy tafiditra ho isan’ireo fiteny tandindonin'ny fanjavonana, saingy moa ve afa-doza ilay fiteny sy ny kolontsaina yorùbá ? Mbola hijery taratra ny momba azy ao anatin'ny kolontsaina yorùbá ve ny andiantaraka any aoriana ary mbola hampiasa ilay fiteny ato anatin'ny 100 taona?
Ireny fanontaniana ireny no nandrisika ahy hanorina ny fiarahamientana “Harena Ara-Kolontsaina Yobamoodua”, fikambanana iray miaro ny zo sy mifantoka amin'ny fanomezana aina indray ary ny fandraketana ny fiteny yorùbá ety anaty habaka nomerika.
Ny maha-zavadehibe ny hamaroam-piteny ety anaty aterineto
« Tsy nosy raha olona tokana » — na hoe afaka hitompo samirery ny fahalalàna. Manana fomba fiteny ny vahoaka niaviako, manao hoe ibi tí ọgbọ́n ẹnìkan pin sí ni ti ẹlòmìíràn ti bẹ̀rẹ̀ (« Eo amin'ny teboka hifaran'ny fahendren'ny olona iray no manomboka kosa ny fahendren'ny iray hafa. »).
Mba hirosoan'ny tontolo misy antsika, tsy maintsy manangona fahalalàna isika, fahalalàna hita any amin'ny faritra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao, toy ny adẹ́mu (mpanangona divay vita avy amin'ny voanio) manangona ny ranoka avy amin'ny hazom-boanio mba hohanin'ny vondrona. Fanampin'izany, misy fomba maro isankarazany azo anaovan-javatra. Hoy izahay kò sí ibi tí a ì í kó ẹdìẹ alẹ́, omi ọbẹ̀ ló dùn ju ara wọn lọ (« Mahandro laoka ketsaketsa isika, na aiza na aiza, saingy ny sasany matsiro kokoa noho ny hafa. »).
Ny soatoavina ara-kolontsaina dia fotokevitra sy idealy fototra ijoroan'ny vondrompiarahamonina rehetra, ary mampiaty ny fomba fijery ny tontolo ananan'ny vahoaka iray : ireo fomba fanao, ifangaroan'ny fombandrazana sy ny fombam-pivavahana; ny soatoavina na ny finoana; ary ny kolontsaina na ny soatoavina mitarika ilay vondrona. Ireo kasinga ara-kolontsaina dia ahitàna ny hainahandro, ireo angano malaza, ny fomba fitafy, ny fiôzôfia, ny mozika, ny fotokevitra, sns…
Ny fiteny dia voafaritra ho toy ny hetra (fehikibo) mampita ny kolontsaina. Èdè ẹni ni ìdánimọ̀ ẹni (« Maripamantarana olona iray ny fiteniny.»). Mamàka lalina ao anatin'ny kolontsaina ny maripamantarana : io no fomba fanehoana misy famoronana izay entintsika mitantara ny tantarantsika, izay ahafahantsika mahatsiaro ny lasa sy maminavina ny hoavy.
Indrisy, nahisaka ho any am-parany any ny fiteny yorùbá ao amin'ny aterineto, ary matetika no ivaivaina sy atao tsinontsinona.
Ohatra, tsy azonao atao ny manonona masoivohom-panjakana na solotena pôlitika iray ao anaty bitsika amin'ny fiteny yorùbá ka hoe hanantena azy hamaly anao. Ny zara fa valinteny dia matetika tonga miaraka aminà taridàlana hoe : « Azafady, amin'ny teny anglisy atao ilay bitsikao. » Rehefa izay no mitranga, toy ny adaladala aho mibitsika amin'ny fiteniko, toy ny hoe niteny vahiny aho ka tsy misy olona vonona hihaino.
Dia mba ahoana ny amin'ireo kabarim-pankahalàna ankolaka na raha ny marina kokoa ny « fankahalàna fiteny » izay manetsiketsika ny aterineto nizeriàna ? Tsaroako fa nandefasako hafatra mivantana ny mpitarikevitra iray izay manana fiaviana yorùbá ary manoratra ny anaran'ny tenany amin'ny yorùbá ampiasàna tsindrimpeo. Kanefa, nanapaka hevitra ny tsy hiraharaha ireo fanotaniana matotra napetrako taminy izy, angamba noho izaho nisafidy ny hanoratra amin'ny fiteny yorùbá !
Fa tsy hanakana ahy tsy hampiasa ny fiteniko ireny zavatra mampalahelo ireny — sinibe iray mitahiry ireo zavaniainana mila tehirizina ety anaty aterineto — satria ‘ẹnìkan kì í pa ohùn mọ́ agogo lẹ́nu’ (« Tsy misy olona ho sahy hampangiana ny feon'ny amponga vy. »). Izay rehetra manandrana manakana ahy tsy hifandray amin'ny fiteniko hatrany am-pahaterahako, manandrana [raha ny marina] hampitsahatra ny fanelezana ny kolontsaiko, dia ny olona tahàka izany no mibahana ny zoko tsy ho afaka maneho hevitra ankalalahana.
Ny kolontsaina no dity mampiray ny olona, mamorona firaisankina ary manetsika vondrompiarahamonina iray. Fanampin'izay, ireo tombontsoa ara-bola azo avy amin'ireo fahalalàna ara-kolontsaina sy ny fahaizamamorona dia manohana ny toekarena miroborobo.
Ary zo ny kolontsaina — na ety na ivelan'ny aterineto.
Katsahan'ny fiarahamientana “Lova ara-Kolontsaina Yobamoodua” ny hampiseho ny zo ho afaka mampiasa ny fiteny yorùbá mba hanapariahana ny lova ara-kolontsaina mifamatotra aminy, ny zo hahazo ireo torohay ety anaty aterineto amin'ny fitenin'ny Ọmọ Káàárọ̀-o-ò-jí-ire (vahoaka yorùbá, raha ny kolontsaina sy ny fifampiarahabàna no resahana), ary ny zo hampiasa ny fiteny yorùbá amin'ireo sehatra nomerika rehetra.
Sehatra nomerika sokafana ho an'ny fiteny rehetra.
Ireo bitsika nalefako nandritra ny herinandro dia nifototra tamin'ny Tondro maha-manerantany ny aterineto sy ireo fotokevitra fototra ankalazain'ny UNESCO (fikambanana ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Fanabeazana, ny Siansa ary ny Kolontsaina) : ny zo maha-olona, ny fisokafana, ny fahafahana miditra, ary ny fandraisana anjara ho an'ireo mpisehatra samihafa (raha afohezina ny anarany : DOAM). Ireo tendro efatra ireo dia ahafahana mametraka fepetra iray ho fampanarahana fenitra ny aterineto manoloana ireo fenitra maha-manerantany.
Nasongadiko eny anoloana ny zavamisy hoe tsy hahita fahombiazana ireo Tanjon'ny Fandrosoana Maharitra (ODD) [fr], ilay fandaharanasan'ny Firenena Mikambana mba « hisian'ny hoavy mendrika sy maharitra kokoa ho an'ny rehetra », raha tsy misokatra ho an'ny rehetra ny aterineto.
Ny fiteny sy ny kolontsaina tsirairay dia manana zo ho azo hidirana amin'ny fomba tsotra sy an-kalalahana ety anaty aterineto. Na izany aza, tsy mbola izay no zavamisy amin'izao fotoana izao. Ny teny anglisy no manome efa ho ny 50 % amin'ireo votoaty ety anaty aterineto.
Ny ankamaroan'ny fiteny, toy ny yorùbá, no tsy afaka idirana amin'ny fomba tsotra ety anaty aterineto noho ny fisian'ny fivakisana nomerika mivandravandra be ateraky ny fihisaran'ny fidirana aterineto sy ny sandany ao Afrika.
Indrisy, nanohintohina ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny hamaroana ara-kolontsaina sy ara-teny ety anaty aterineto izany.
Nandritra ny andro efatra, nibitsika momba ny fiteny yorùbá sy ny zony ety anaty eterineto aho. Nanolotra torohay amin'ny ankapobeny momba ny fivoaran'ny endriky ny fiteny yorùbá rehefa soratana, ny fanekena azy ary ny fomba nampaiasànay ireo fitaovana ety anaty habaka nomerika mba hampahafantarana azy. #IdentityMatrix #Yoruba
Ny tsy fisian'ny tohana sahaza avy amin'ireo masoivohom-panjakana sy ireo fikambanana hafa dia tsy mandrisika mihitsy ireo ezaka famohazana ataon'ireo mpikatroka mpiaro ny fiteny sy ny lova ara-kolontsaina. Tsy misy azo raisina afa-tsy amin'ireo rantsana sy masoivoho mpamatsy avy any ivelany ny ankamaroan'ireo mety ho famatsiambola — kely ihany no avy ao amin'ilay tanibe.
Torak'izany koa, tsy misy ny politikam-panjakàna ao Nizerià atao mba hanosehana ireo hetsika fanomezana aina vao ny fiteny ary ireo mpikatroka no matetika mizaka irery io enta-mavesatra io.
Ao amin'ny kaontiko Twitter (@yobamoodua) no zaraiko ireo fahalalàna nentindrazako mba hanabeazana sy hanentanana ireo mpanjohy ahy hitahitry ny kolontsaina sarobidinay. Amin'ny ankapobeny ny andro Alarobia dia atokako hanaovana kilalao, ka izay mpandresy amin'izany dia tolorana fahana aterineto amin'ny finday ho toy ny loka fankaherezana.
Mba hahafahana manakatra ny hevitr'ireo fiteny miavaka tsy mbola nisy velively tamin'ny fiteny yorùbá, Yobamoodua dia mamorona vokabolary siantifika sy teknolojika vaovao. Mba hanosehana io hetsika io ho lasa lavitra kokoa, mikasa aho ny hikarakara ny vovonana voalohany momba ireo “meta-languages” yorùbá alohan'ny hifaranan'ny taona 2020.
Ilaina avezivezy (aparitaka) ny fahalalàn'izao tontolo izao, izany koa no antony namoronako ireo fitaovana fampianarana amin'ny fiteny yorùbá momba ny fiovàn'ny toetrandro [yo].
Mba hanatratrarana ny Tanjon'ny fampandrosoana maharitra (ODD), isika tsy maintsy mamorona tontolo iray mety ho an'ny fivelaran'ireo fiteny teratany. Handroso ny tontolontsika rehefa mandray fiteny marolafy ny aterineto. Miaraka amin'ny fahatsapantena ho ao anatiny sy ny fananana hambo, ireo mpiteny ny fiteny yorùbá, toa ahy, dia hahatsapa fa ho voaaro ety anaty aterineto mba holovain'ny taranaka hoavy ny kolontsaina sy ny maripamantarana azy ireo.
Ity dia tetikasa iray vatsian'ny Tahirimbola Afrikàna ho zo nomerika an'ny Fiarahamiasa momba ny pôlitika erantany mikaszika ny teknolojian'ny fifandraisana (TIC) ao Afrika atsinanana sy atsimo (CIPESA).